Loves~ - Starrynight_yz - Wattpad
510K 37.4K 31
35.2K 6.1K 16
ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်က ကွာခြားချက်တွေများလွန်းတယ် ချာတိတ်... အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားကွာခြားတယ်... ဘဝအတွေ့အကြုံချင်းကွာခြားတယ်... ခံယူချက်တွေကွာခြားတယ်... လေးနက်မှုတွေကွာခြားတယ်... ဒီလိုလူနှစ်ယောက်အတွက် ချစ်ခြင်းတွေက ထပ်တူကျပါလိမ့်မယ်လို့ မင်းယုံကြည်နေသလား... - Perfect 13 - ကိုယျတို့နှဈယောကျက ကှာခွားခကျြတှမြေားလှနျးတယျ ခြာ...
Devils Don't Love ||Completed||
97.5K 14.8K 31
အခဈြကွောငျ့နာကငျြဖူးတဲ့ နတျဆိုး နဲ့ အခဈြကိုအခုမှရှာတှတေဲ့ လူသား အချစ်ကြောင့်နာကျင်ဖူးတဲ့ နတ်ဆိုး နဲ့ အချစ်ကိုအခုမှရှာတွေ့တဲ့ လူသား Wang Yi Bo ♥ Xiao Zhan BO JUN YI XAO Own creation by Hwan_Tianyi [zawgyi+unicode]
285K 31.9K 48
တချို့လူတွေက နူးညံ့တယ် ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်းကျ ကြံ့ခိုင်တယ်။ တချို့တွေကတော့ ကြံ့ခိုင်တယ် ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်းကျ မူးညံ့လွန်းလှတယ်။ တခြို့လူတှကေ နူးညံ့တယျ ထငျရပမေယျ့ တကယျတမျးကြ ကွံ့ခိုငျတယျ။ တခြို့တှကေတော့ ကွံ့ခိုငျတယျ ထငျရပမေယျ့ တကယျတမျးကြ မူးညံ့လှနျးလှတယျ။
Di Di Ai Ni!!
537K 45.5K 20
သင် ငယ်ငယ်တုန်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဖြောင့်ထင်ပြီး ငြင်းခဲ့တဲ့ အပေအတေလေးဟာ သင့်ကိုယ်သင် အကွေးမှန်းသိတဲ့အခါမှာ အထက်ပုဂ္ဂိုလ်လေးအဖြစ်နဲ့ ပြန်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်. .
Middle Name of LOVE (Completed)
16.2K 2K 18
Just an ordinary love story of two boys.
My Sweetest Mistake (Completed)
2.1K 275 2
Not all mistakes feel wrong. Some mistakes can feel so right that they make you go back and commit again.. and again!
Where the Sidewalk Ends (Completed, Yizhan/Zhanyi)
31.3K 5.8K 62
Don't be afraid, just hold my hand I will walk with you Until the very end.... (Both in Unicode and Zawgyi)
Winter's flower ||Completed||
18K 1.4K 5
ဆောင်းရာသီမှာပန်းမပွင့်ပာဘူးလို့ ဘယ်သူပြောသလဲ ဆောငျးရာသီမှာပနျးမပှငျ့ပါဘူးလို့ ဘယျသူပွောသလဲ Wang Yi Bo x Xiao Zhan ❄Winter comes bless on YiZhan❄ ||Zawgyi & Unicode|| [@LitwitsOfficial 's YiZhan fanfiction contest]
Today, tomorrow and the day after ||Completed||
68.4K 7K 18
This is aboutahigh schooler boy who unconditionally fell in loved with his homeroom teacher. Wang Yi Bo ♥ Xiao Zhan The original doujinshi: Today, tomorrow and the day after (Gintama dj) Mangaka: PLUG (Nagisa) [zawgyi+unicode]
Hybrid Child ||Completed||
9.4K 782 8
Those pale, cold, small hands~ No matter how much we ran and ran, his hands stayed cold. That's why I was inahurry to warm his small hands. Original Manga by Nakamura Shungiku YiZhan version rewritten by Hwan_Tianyi [zawgyi+unicode]
61K 6.9K 23
ငယျငယျတညျးက မိနျးကလေးတဈယောကျကိုပဲ ပွိုငျကွိုကျလာတဲ့ ကောငျလေးနှဈယောကျနဲ့ ရုတျတရကျပွောငျးလဲသှားတဲ့ အခွအေနေ ငယ်ငယ်တည်းက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုပဲ ပြိုင်ကြိုက်လာတဲ့ ကောင်လေးနှစ်ယောက်နဲ့ ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အခြေအနေ Wang Yi Bo ♥ Xiao Zhan BO JUN YI XIAO YiZhan becomes rivals?? [zawgyi+unicode]
156K 18.4K 35
Yizhan one shot collection. Actually two shots and three shots included.